Dabara Adaba Feeding ịgbado ọkụ Machine Manufacturers, Suppliers - China Dabara Adaba ịgbado ọkụ ịgbado ọkụ Machine Factory
Onodi Dabara Adaba ịgbado ọkụ Machine-1600
Ngwa na Njirimara Kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ikpere ụkwụ, ịkụ gọlfụ, obe na ọdịdị Y (45 Celsius na 60 Celsius) akwa akwa nke Pee, PP, PVDF na ogbako. A na-ejikwa ihe nkedo nkedo ahụ dị ogologo ka ọ dị ogologo. Rated Ihe jikọrọ ọnụ. Ọ dịghị ihe na-anọgide ma họrọ dị iche iche pụrụ iche clamps mgbe echepụta dị iche iche oyiyi akwa. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere. Electric planing ngwá ọrụ na nchekwa ịgba ịgba mgba ọkụ. ► Low-amalite nsogbu na elu pụrụ ịdabere na akara Ọdịdị. Iche iche ...
Onodi Dabara Adaba ịgbado ọkụ Machine-1200
Onodi Dabara Adaba ịgbado ọkụ Machine-450-630
Ngwa na Njirimara Kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ikpere ụkwụ, ịkụ gọlfụ, obe na ọdịdị Y (45 Celsius na 60 Celsius) akwa akwa nke Pee, PP, PVDF na ogbako. A na-ejikwa ihe nkedo nkedo ahụ dị ogologo ka ọ dị ogologo. Rated Ihe jikọrọ ọnụ. Ọ dịghị ihe na-anọgide ma họrọ dị iche iche pụrụ iche clamps mgbe echepụta dị iche iche oyiyi akwa. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere. Electric planing ngwá ọrụ na nchekwa ịgba ịgba mgba ọkụ. ► Low-amalite nsogbu na elu pụrụ ịdabere na akara Ọdịdị. Iche!
Onodi Dabara Adaba ịgbado ọkụ Machine-315
Ngwa na Njirimara Kwesịrị ekwesị maka ịmepụta ikpere ụkwụ, ịkụ gọlfụ, obe na ọdịdị Y (45 Celsius na 60 Celsius) akwa akwa nke Pee, PP, PVDF na ogbako. A na-ejikwa ihe nkedo nkedo ahụ dị ogologo ka ọ dị ogologo. Rated Ihe jikọrọ ọnụ. Ọ dịghị ihe na-anọgide ma họrọ dị iche iche pụrụ iche clamps mgbe echepụta dị iche iche oyiyi akwa. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere. Electric planing ngwá ọrụ na nchekwa ịgba ịgba mgba ọkụ. ► Low-amalite nsogbu na elu pụrụ ịdabere na akara Ọdịdị. Nke iche t ...
Sadulu Fusion Machine-SDM1200
Ngwa na Njirimara Kwesịrị Ekwesị maka ịchepụta Pee na-ebelata tee na ogbako. Rated Integrated ọrụ nke ịgbado ọkụ na taping enyere mezue dum echepụta usoro. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku ebu. ► Iche iche abụọ-ọwa ngụ oge ndekọ oge na soaking na obi jụrụ n'ụzọ. ► Digital mgbali elu nke ziri ezi dị elu na-egosi ọgụgụ doro anya karị. Linear ndu ụzọ na-onwem na kpo oku efere na-adọkpụpụta efere. A-► PLC akara maka akpaka usoro iji hụ elu ịgbado ọkụ st ...
Sadulu Fusion Machine-SDM630
Sadulu Fusion Machine-SDM315